MUC Myanmar Unicode Converter - Chrome Web Store
MUC Myanmar Unicode Converter
offered by myanmardev.mmd
Myanmar Unicode Converter Extension
This extension is easy to convert any text of Unicode to Zawgyi and Zawgyi to Unicode. If the user can't read any of Myanmar text in the browser, note, and any text file, easy to do with step by step. Follow this instruction.
1. Copy to text
2. Click MUC and Paste
4. Copy the converted file and Paste to your desire file, comment, conversion and Facebook Post.
"Easy life, easy convert, powerful and fast converter ever"
If any feedback to developer,
contact us - https://www.facebook.com/mmjmobilejunction
ယခု Extension လေးကတော့ Unicode စာသားတွေကို Zawgyi သမားက ဖတ်လို့မရ၊ပြောင်းလို့မရတဲ့သူများအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောင်းပြီး ဖတ်လို့ရအောင်၊ ရေးလို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် Extension လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့မရတဲ့စာတွေ၊ ပြောင်းချင်တဲ့စာတွေကို
1. Textကို copy လုပ်ပါ။
2. Text box ထဲကို Paste လုပ်ပါ။
3. Convert လုပ်ပါ။
4. Copy လုပ်ပြီးရင် သင့်ပြန်လည် ဖော်ပြချင်တဲ့ နေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူပြန် Paste လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
ယခု Extension လေးကတော့ Unicode စာသားတှကေို Zawgyi သမားက ဖတျလို့မရ၊ပွောငျးလို့မရတဲ့သူမြားအတှကျ လှယျလှယျကူကူ ပွောငျးပွီး ဖတျလို့ရအောငျ၊ ရေးလို့ရအောငျ ပွုလုပျပေးမယျ့ Extension လေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဖတျလို့မရတဲ့စာတှေ၊ ပွောငျးခငျြတဲ့စာတှကေို
1. Textကို copy လုပျပါ။
2. Text box ထဲကို Paste လုပျပါ။
3. Convert လုပျပါ။
4. Copy လုပျပွီးရငျ သငျ့ပွနျလညျ ဖျောပွခငျြတဲ့ နရောမှာ လှယျလှယျကူပွနျ Paste လုပျလိုကျရုံပါဘဲ။